ရှင်ယုဒ သြဝါဒစာ။ – Letter from Jude the Apostle – JESUS UNLTD
ရှင်ယုဒ သြဝါဒစာ။ – Letter from Jude the Apostle
၁ ကျွန်တော် ယုဒက ခင်ဗျားတို့ဆီကို စာရေးလိုက်ပါတယ်။ ကျွန်တော်က ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့အစေခံဖြစ်ပြီးတော့ ယာကုပ်ရဲ့ညီ တစ်ယောက် ဖြစ်ပါတယ်။ ခင်ဗျားတို့ကိုချစ်တဲ့ အဖဘုရားရှင်ရဲ့ခေါ်ခြင်းကို ခင်ဗျားတို့ လက်ခံခဲ့ကြတယ်။ ခင်ဗျားတို့ဟာ ယေရှုခရစ်နဲ့သက်ဆိုင်ကြပါတယ်။ ဒါကြောင့် သူက ခင်ဗျားတို့ကို ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ပါတယ်။
၂ ဘုရားသခင်က ခင်ဗျားတို့ကို ကရုဏာ၊ ငြိမ်သက်ခြင်း နဲ့ ချစ်ခြင်းမေတ္တာတွေ ကြွယ်ဝစွာပေးပါစေ။
၃ ချစ်ခင်ရတဲ့သူငယ်ချင်းတို့၊ ဘုရားသခင်က လူတိုင်းကိုပေးခဲ့တဲ့ အပြစ်ကနေ ကယ်တင်ခြင်းအကြောင်းကို ခင်ဗျားတို့ဆီ ကျွန်တော် သိပ်ရေးချင်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ တခြားအကြောင်းအရာတွေကို ရေးသင့်တယ်လို့ ကျွန်တော် ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။ ဘုရားသခင်က ယုံကြည်ခြင်းကို သူ့ရဲ့သန့်ရှင်းသူတွေဆီ တစ်ကြိမ်တည်းနဲ့ ထာဝရအတွက် ပေးသနားခဲ့ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဆက်ပြီးယုံကြည်ခြင်းရှိဖို့ အစွမ်းကုန်အားထုတ်ကြပါလို့ ခင်ဗျားတို့ကို ကျွန်တော် တောင်းဆိုပါတယ်။
၄ ဟိုးအရင်က ကျမ်းစာထဲမှာ ဘုရားသခင်က ပြစ်တင်ရှုတ်ချခဲ့တဲ့သူတွေကို ခင်ဗျားတို့တွေ အားကိုးခဲ့ကြလို့ ဒါကို ကျွန်တော် ပြောနေရတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဘုရားမဲ့လူတွေက ဘုရားရှင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်အကြောင်း သွန်သင်ချက်ကို လိုရာဆွဲပြီးတလွဲတချော် လုပ်ကြတယ်။ ဘုရားသခင်က ငါတို့ကို သူ့ရဲ့ကျေးဇူးတော် ပေးပြီဖြစ်လို့ အကျင့်စာရိတ္တပျက်တဲ့ဘဝပုံစံနဲ့ နေလို့ရပါတယ် ဆိုပြီးတော့ သူတို့တွေ ပြောကြတယ်။ ဒီလူတွေက ဘုရားရဲ့အမြင့်မြတ်ဆုံး တန်ခိုးအာဏာကို ငြင်းပယ်ခဲ့ကြတယ်။ သူတို့တွေက ကျွန်တော်တို့ရဲ့သခင် ယေရှုခရစ်တော်ကို ငြင်းဆိုခဲ့ကြတယ်။
၅ ခင်ဗျားတို့ သိပြီးသား အကြောင်းအရာတစ်ချို့ကို ကျွန်တော် ပြန်သတိပေးချင်ပါတယ်။ အစမှာ ဘုရားသခင်က ဣသရေလလူမျိုးတွေကို အီဂျစ်လူမျိုးတွေရဲ့ကျွန်ဘဝကနေ ကယ်တင်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ နောက်ပိုင်းမှာ ဘုရားသခင်က ယုံကြည်ခြင်းမရှိတဲ့ ဣသရေလလူမျိုးတွေကို ဖျက်ဆီးခဲ့ပါတယ်။
၆ ဘုရားသခင် လုပ်စေချင်တာကို ငြင်းဆန်ခဲ့ကြတဲ့ ကောင်းကင်တမန်တွေ အကြောင်းကိုလည်း ခင်ဗျားတို့ကို ကျွန်တော် ပြန်သတိပေးချင်ပါတယ်။ ဒီကောင်းကင်တမန်တွေက သူတို့နေရမဲ့နေရာမှာ မနေဘဲ အဲ့ဒီနေရာကို ထားခဲ့ကြတယ်။ ဒါကြောင့် ဘုရားသခင်က သူ့ကိုပုန်ကန်တဲ့ ကောင်းကင်တမန်တွေကို သံကြိုးတွေနဲ့ ထာဝရ ချည်နှောင်ထားလိုက်ပါတယ်။ အခု သူတို့တွေက အမှောင်ထဲမှာ ချည်နှောင်ခံထားရတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဒီကောင်းကင်တမန်တွေကို ဘုရားရှင်က တရားစီရင်မဲ့နေ့ကြီး ရောက်လာလိမ့်မယ်။
၇ သောဒုံ၊ ဂေါမောရနဲ့ အိမ်နီးချင်း မြို့တွေကို စဉ်းစားကြည့်ကြပါ။ အဲဒီမှာ လူတွေဟာ အကျင့်စာရိတ္တယိုယွင်းပျက်စီးတဲ့ ဘဝပုံစံနဲ့ နေကြပြီးတော့ သဘာဝမဟုတ်တဲ့ လိင်မှုကိစ္စတွေကို ကျူးလွန်ခဲ့ကြတယ်။ ဒါကြောင့် ဘုရားသခင်က ဒီမြို့တွေကို မီးနဲ့ဖျက်ဆီးပြီးတော့ အပြစ်ဒဏ်ပေးခဲ့ပါတယ်။ သူ ဒီလိုလူတွေကို တရားစီရင်မယ်၊ ပြီးတော့ သူတို့တွေက မီးနဲ့ ထာဝရ လောင်တာခံကြရလိမ့်မယ် ဆိုပြီးတော့ ဘုရားသခင်က ကျွန်တော်တို့ကို သတိပေးထားပါတယ်။
၈ ညစ်ညူးတဲ့စိတ်ကူးယဉ်တွေမှာ ပျော်မွေ့ပြီးတော့ သူတို့ရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာနဲ့ ရှက်စရာကောင်းတဲ့အရာတွေကို လုပ်ကြတဲ့ လူတွေဆီကိုလည်း ဒီအတိုင်းပဲ ဖြစ်ပျက်လိမ့်မယ်။ ဒီလူတွေဟာ အုပ်ချုပ်သူတွေကို နာခံဖို့ငြင်းဆန်ကြပြီးတော့ ဘုန်းကြီးပြီး ဘုန်းကျက်သရေရှိတာကိုကျတော့ ကျိန်ဆဲကြတယ်။
၉ အမြင့်ဆုံးကောင်းကင်တမန်ဖြစ်တဲ့ မိက္ခေလနဲ့ မာရ်နတ်တို့ မောရှေရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာအကြောင်းကို အငြင်းအခုံဖြစ်ခဲ့ကြတဲ့အချိန်မှာ မိက္ခေလဟာ မာရ်နတ်ကို စော်ကားပြောဆိုဖို့ ဒါမှမဟုတ် ပြစ်တင်ရှုတ်ချဖို့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ခွင့်မပြုခဲ့ပါဘူး။ အဲ့ဒီလိုလုပ်မဲ့အစား သူက မာရ်နတ်ကို “ဘုရားသခင်က မင်းကို ဒဏ်ခတ်ပါစေ။”လို့ပဲ ပြောခဲ့ပါတယ်။
၁၀ ဒါပေမဲ့ ဒီလူတွေကတော့ သူတို့နားမလည်တဲ့ တစ်ခုခုအကြောင်းကို စော်ကားတဲ့စကားတွေ ပြောကြတယ်။ တွေးတောဆင်ခြင်မှုမရှိတဲ့ တိရိစ္ဆာန်တွေလိုပဲ သူတို့ရဲ့ပင်ကိုယ်အသိစိတ်ကို အခြေခံပြီးတော့ ပြုမူကြတယ်။ ဒီလိုနဲ့ သူတို့ကိုယ်သူတို့ ဖျက်ဆီးကြတယ်။
၁၁ သူတို့ကို အမင်္ဂလာက စောင့်ကြိုနေတယ်။ သူတို့က သူ့ညီကို သတ်ခဲ့တဲ့ ကာဣနလိုပဲ ပြုမူကြတယ်။ သူတို့က ဗာလမ်လိုပဲ ဘုရားရဲ့အမှန်တရားထက် ငွေကြေးကို ပိုပြီးတော့ တပ်မက်ကြတယ်။ ဒါကြောင့် ပုန်ကန်မှုကို ဦးဆောင်ခဲ့တဲ့ ကောရ လိုပဲ ပျက်စီးသေဆုံး ကြရလိမ့်မယ်။
၁၂ ဒီလိုလူတွေက သခင်ယေရှု နဲ့ ခင်ဗျားတို့ အချင်းချင်းအပေါ်ထားတဲ့ ခင်ဗျားတို့ရဲ့ချစ်ခြင်းမေတ္တာကို ဖော်ပြတဲ့ ပွဲတော်သုံးဆောင်တဲ့အချိန်မှာ ခင်ဗျားတို့နဲ့အတူ ပွဲတော်ကို စားသောက်ပြီးတော့ မျှဝေပါဝင်ကြတယ်။ ဒါပေမဲ့ ရေအောက်ကျောက်တန်းတွေက သဘောၤတစ်စီးအတွက် အန္တရာယ်ရှိသလိုပဲ သူတို့တွေက ခင်ဗျားတို့အတွက် အန္တာရာယ်ရှိပါတယ်။ သူတို့တွေက ကိုယ့်အတွက်ပဲဂရုစိုက်တဲ့ အရှက်မရှိတဲ့သိုးထိန်းတွေလို ပြုမူကြတယ်။ သူတို့တွေက ကောင်းကင်အနှံ့ လေတိုက်လို့လွင့်လာပေမဲ့ ဘာမိုးရေမှ မရတဲ့ တိမ်တွေလိုပါပဲ။ သူတို့တွေက ဆောင်းဦးရာသီမှာ ဘာအသီးမှမသီးတဲ့ သစ်ပင်တွေလိုပါပဲ။ ဒီလိုမျိုး သစ်ပင်တွေက သေတယ်လို့ ဆိုလိုပါတယ်။ အဲဒါကြောင့် ဒီသစ်ပင်တွေက အမြစ်ကနေ အနှုတ်ခံရပြီးတော့ ဒုတိယအကြိမ် သေကြရလိမ့်မယ်။
၁၃ သူတို့တွေက ညစ်ပတ်တဲ့အမြှုုပ်တွေနဲ့ ပြည့်နေတဲ့ ပင်လယ်လှိုင်းကြမ်းတွေလိုပဲ။ ဒီလိုလူတွေက ကောင်းကင်ကနေကြွေတဲ့ ကြယ်တွေလိုပါပဲ။ သူတို့အတွက် ဘုရားသခင် ပြင်ဆင်ထားတဲ့ အတိမှောင်မိုက်ထဲမှာ ထာဝရ ပျောက်ကွယ်သွားကြလိမ့်မယ်။
၁၄ ဧနောက်က အာဒံ ပြီးရင် ခုနှစ်ခုမြောက်တဲ့မျိုးဆက်မှာ အသက်ရှင်နေထိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ပြီးတော့ ဧနောက်က ဒီလိုမျိုးလူတွေအကြောင်းကို “သခင်ဘုရားက သူ့ရဲ့သန့်ရှင်းသူတွေအများကြီးနဲ့ ကြွလာတယ်။
၁၅ ပြီးတော့ ဘုရားရှင်က လူတွေအားလုံးကို တရားစီရင်မယ်။ သူ့ကို မယုံကြည်ခဲ့တဲ့သူတွေနဲ့ ဆိုးယုတ်တဲ့အမူအကျင့်တွေ လုပ်ခဲ့တဲ့ လူတစ်ယောက်ချင်းစီကို ဘုရားသခင်က စီရင်ချက်ချလိမ့်မယ်။ သခင်ဘုရားက သူ့ကို ငြင်းပယ်ပြီးတော့ ဆိုးရွားတဲ့စကားတွေနဲ့ သူ့ကို ကဲ့ရဲ့ရှုတ်ချခဲ့တဲ့ အပြစ်သားတစ်ယောက်ချင်းစီတိုင်းကို အပြစ်စီရင်လိမ့်မယ်။” လို့ ကြိုတင် ဟောခဲ့ပါတယ်။
၁၆ ဒီလိုလူတွေက အမြဲတမ်း စိတ်ဆိုးဒေါကထွက်ကြတယ်။ ပြီးတော့ သူတို့ရဲ့စိတ်တိုင်းမကျမှုတွေကို အချိန်တိုင်း ဖော်ပြကြတယ်။ သူတို့ဟာ သူတို့ရဲ့တပ်မက်မှုအလိုဆန္ဒတွေကို ဖြည့်ဆည်းကြပြီးတော့ သူတု့ိကိုယ်သူတို့ ဝါကြွားကြတယ်။ ပြီးတော့ ကိုယ့်အတွက် အကျိုးအမြတ်ရဖို့ တခြားလူတွေကို မြှောက်ပင့်ချီးကျူးတဲ့ စကားတွေ ပြောကြတယ်။
၁၇ ချစ်သူငယ်ချင်းတို့၊ ကျွန်တော်တို့ရဲ့သခင် ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့ တမန်တော်တွေ ကြိုတင်ဟောပြောခဲ့တဲ့စကားတွေကို ခင်ဗျားတို့တွေ သတိရကြရမယ်။
၁၈ “နောက်ဆုံးကာလမှာ လူတွေက ဘုရားရဲ့အမှန်တရားကို လှောင်ပြောင်ကြလိမ့်မယ်။ သူတို့တွေက ဘုရားသခင်ကို ဆန့်ကျင်ပြီးတော့ သူတို့ရဲ့ တပ်မက်မှုအလိုဆန္ဒတွေကို ဖြည့်ဆည်းကြလိမ့်မယ်။” လို့ သူတို့တွေ ပြောခဲ့ကြပါတယ်။
၁၉ ဒီလိုလူတွေက ယေရှုယုံကြည်သူတွေ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်ဆန့်ကျင်အောင် လုပ်ဆောင်ကြတယ်။ သူတို့မှာ ဘုရားရဲ့ဝိညာဉ်တော် မရှိတဲ့အတွက် ဒီလောကသားတွေလို ပြုမူကြတယ်။
၂၀ ကျွန်တော်ချစ်ရတဲ့သူငယ်ချင်းတို့၊ ခင်ဗျားတို့တွေဟာ တစ်ယောက်ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကို တစ်ယောက်က ခိုင်မာစေပြီးတော့ သန့်ရှင်းမြင့်မြတ်စွာနဲ့ အသက်ရှင်နေထိုင်သင့်ပါတယ်။ ပြီးတော့ ခင်ဗျားတို့ ဆုတောင်းတဲ့အချိန်မှာ သန့်ရှင်းတဲ့ဝိညာဉ်တော်က ခင်ဗျားတို့ကို လမ်းပြပါစေ။
၂၁ ဘုရားသခင်က ခင်ဗျားတို့ကို ချစ်တယ်။ ဒါကြောင့် ဘုရားရဲ့ချစ်ခြင်းမေတ္တာကို ခင်ဗျားတို့တွေ အခိုင်အမာ ယုံကြည်ကြရမယ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့သခင် ယေရှုခရစ်တော်က ခင်ဗျားတို့ကို သနားကရုဏာထားပြီးတော့ ထာဝရအသက်ကိုပေးမယ်ဆိုတာ မျှော်လင့်ရင်းနဲ့ အသက်ရှင်ကြပါ။
၂၂ ယုံကြည်ခြင်းမှာ အားနည်းလာတဲ့သူတွေကို စာနာရိုင်းပင်းပြီးတော့ အားပေးကြပါ။
၂၃ ဒါပေမဲ့ တစ်ချို့လူတွေက သူတို့သေသွားတဲ့အခါ မီးငရဲက စောင့်ကြိုနေတယ်ဆိုတာကို ကြားတဲ့အခါ ထိတ်လန့်ကြောက်ရွံ့ကြလိမ့်မယ်။ ဒီကြောက်ရွံ့ခြင်းကတစ်ဆင့် ဒီလိုလူတွေကို မီးငရဲကနေ ခင်ဗျားတို့တွေ ဆွဲယူကယ်တင်နိုင်ပါတယ်။ လူတွေရဲ့အမှားကို ပြုပြင်ပေးတဲ့အခါ သူတို့အပေါ် နူးညံ့သိမ့်မွေ့ကြပါ။ ဒါပေမဲ့ သူတို့ရဲ့အပြစ်တွေကိုတော့ တင်းကျပ်ပါ။ သူတို့တွေထဲက တချို့တွေဆိုရင် သူတို့ရဲ့အပြစ်နဲ့စွန်းထင်းစေခဲ့တဲ့ သူတို့ရဲ့အဝတ်အစားတွေတောင်မှ ခင်ဗျားတို့ ရွံရှာတဲ့အထိ အပြစ်တွေလုပ်ပြီးတော့ အသက်ရှင်ကြတယ်။
၂၄ ဒါပေမဲ့ ဘုရားသခင်က ခင်ဗျားတို့ကို အပြစ်ထဲ လဲကျခြင်းကနေ ကယ်တင်နိုင်ပါတယ်။ ပြီးတော့ ခင်ဗျားတို့က ဘုရားရဲ့ရှေ့မှောက်မှာ ဘာအပြစ်မှမရှိဘဲ ရပ်ရပြီးတော့ ပျော်ရွှင်ကြရလိမ့်မယ်။
၂၅ ဉာဏ်ပညာအရာမှာ တစ်ဆူတည်းရှိတဲ့ ဘုရားသခင်ကို ချီးမွမ်းကြပါ။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ သခင်ယေရှုခရစ်တော် လုပ်ပေးခဲ့တဲ့အရာကြောင့် ဘုရားသခင်က ကျွန်တော်တို့ကို ကယ်တင်ခဲ့ပါတယ်။ ဘုရားသခင်က အချိန်ကို မဖန်ဆင်းခင်ကတည်းတောင် ဘုန်းကျက်သရေနဲ့ ကြီးမြတ်ခြင်း၊ အစွမ်းတန်ခိုးနဲ့ အာဏာစက်တွေဟာ ဘုရားသခင်နဲ့ သက်ဆိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ပြီးတော့ ဘုရားသခင်က ကမ္ဘာအဆက်ဆက် ကိုးကွယ်ခြင်းနဲ့ ချီးမြှောက်ခြင်းကို ခံထိုက်ပါတယ်။ အာမင် - ပြည့်စုံပါစေ။ 1 I am Jude who is writing to you. I amaservant of Jesus Christ andabrother of James. You received your calling from God the Father who loves you. You belong to Jesus Christ who protects you.